août 2019 - Lalamasaka Hatry ny Ela
Accueil - août 2019
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 29 août 2019 · Last modified 3 décembre 2019
Ny maha Baiboly ny Baiboly dia ny fisian’ny zava – dehibe sy fampianarana tahaka ireto sasantsasany ireto ao : Andriamanitra no namorona ny olombelona. Lavo ny olombelona ka tsy nankato an’Andriamanitra. Nandidy fanamelohana mandrakizay any amin’ny helo noho ny heloky ny olombelona Andriamanitra. Nanomana lalana hamonjena azy Andrimanitra (amin’ny alalan’i Jesosy). Mety ho voavonjy ny olona raha manaiky ny lalan’Andriamanitra sy...